Home » Featured » #NABSHOWNY Aza manadino ny fanolorana fanolorana ataon'ny ICG: Ahoana no ahafahan'ny televiziona tsy mahaleotena misintona Multi-Cam!
Maro ny mpandraharaha manerantany no miombona, fa ireo fomba amam-pitaovanay ny fahitalavitra maromaro dia niova haingana, miaraka amin'ireo teknika izay eo am-pelatanan'ny TV mivantana ankehitriny. Ny toerana tsara indrindra ahafahana mahazo ny asa sy ny teknika vaovao dia ny fanatrehana ny Kat Show New York ary mihaino ny International Cinematographers Guild (ICG, IATSE Local 600) fampisehoana Ny fampiasana televiziona tsy voafora dia manamboatra Multi-Cam tontonana. Ity adihevitra ity dia hatao ao Alarobia, Oktobra 17 ao amin'ny 2: 45 ao amin'ny Lohataona lehibe ao amin'ny Jacob K. Javits Foibe ao New York City 17-18. Ireo izay ao amin'ny tontonana dia ahitana ny: Tale Michael Pearlman; Camera Operators: Selene Richholt, SOC ary Tom Wills, ireo manam-pahaizana dia hanazava ny fametrahana indray ny famokarana sary amin'ny famokarana sarimihetsika.
"Ny mpikambana ICG dia mpandray anjara lehibe amin'ny tontolon'ny onjam-peo tsy voafaritra haingana ary faly izahay miara-miasa amin'ny NAB mba hitranga ity fivoriana sarobidy ity." hoy ny filoha Steven Poster, ASC.
Aza adino koa fa amin'ny manaraka, ireo mpandraharaha Jeff Muhlstock, SOC ary Todd Armitage, Ny SOC dia hiresaka momba ny zavakanto momba ny fakantsary izay miasa ao amin'ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny SOC Ny fiaraha-miasan'i Sneaky Pete. Ho toy ny, ny ampitson'iny, Selene Richholt dia hizara ny fomba fijeriny amin'ny tontolon'ny fanohanana #GALSNGEAR izay hifantoka amin'ny vehivavy amin'ny famokarana sy famokarana lahatsoratra.
Aoka ho azo antoka ny hitazona ny mari-pamantarana sy ny fanatrehanao #NABSHOWNY tsy ho tara! Manorata eto: www.nabshowny.com/conference/postproduction-conference-nyc
FANDIKAN-TENIN'NY TONTOLO IAINANA ISIKA (ICG):
Ny International Cinematographers Guild (IATSE Local 600) dia maneho mihoatra ny mpikambana 8,500 izay miasa ao amin'ny horonantsary, televiziona ary dokam-barotra ho mpitantana ny sary, mpandraharaha mpanafika, mpandinika sary, mpaka sary, mpanampy amin'ny fakantsary, mpilalao horonantsary, mpikambana amin'ny ekipa fakan-tsary sy ICG publicists. Ny sendikan'ny mpilalao sinema voalohany dia niorina tao New York tamin'ny 1926, narahan'ny sendika tao Los Angeles ary Chicago, saingy tsy tamin'ny 1996 no nateraky ny fikambanana nasionaly ny 600. Ny hetsika mitohy ataon'ny ICG dia ny fampisehoana ny Cinematographer Awards sy ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny lokan'ny mpandrindra ny ICG Awards. Ny Gild ihany koa dia mamoaka ny ICG Magazine nahazo mari-pankasitrahana www.icgmagazine.com
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Kat 2015 Kat 2016 Kat Show Kat Show 2016 Kat fampisehoana Careers Las Vegas Kat Show Kat Show Registration NAB16 nabshow National Association ny ireo fahitalavitra Show lahatsoratra famokarana Post Production World sprockit	2018-10-15
Previous: Fomba fanehoana ny fampisehoana farany amin'ny fisoratana farany indrindra ao amin'ny NAB NY 2018
Next: Mpilalao horonantsary mpianatra nohon'ny fikambanana Amerikana mpilalao sarimihetsika